News - Ndi FRP ji kpachie oghere gboo mkpa gi?
FRP ji kpachie oghere bụ ụdị efere yiri ihe onwunwe na ọtụtụ oghere, nke a na-mere nke iko eriri dị ka a nwee ume ihe, unsaturated polyester resin as the matrix, and a special processing compound. FRP ji kpachie oghere nwere ike ji mee dị ka a bughi ihe. Ejiri dị ka ala, mkpuchi mmiri, osisi ọdọ mmiri osisi, ikpo okwu, oche ụgbọ mmiri, steepụ, ụzọ plank, wdg.na gburugburu ebe obibi. Ihe na-eguzogide corrosion, ire ọkụ na-ere ọkụ, mkpuchi na-enweghị magnetik, agba agba na ụdị dị iche iche ịhọrọ.
● Akwa-edu ngwaọrụ
1) Alkali na-enweghị ntụ dị aja
2) Ihe dị elu nke carbon carbonate dị elu
3) pigments carbonato na-adịchaghị mma gburugburu ebe obibi
4) Ortho-phthalic mmiri
Ise ise na-arụ ọrụ aka
1) Nkịtị grating
2) Microporous ji kpachie oghere
3) Frosted ji kpachie oghere
4) Pipe grating
5) Ngwakọta ihe mejupụtara
1) Nguzogide mmebi, enweghị nchara, ndụ ogologo ndụ na enweghị mmezi.
2) dị fechaa, dị elu ike, mfe ebipụ ma wụnye.
3) Onye na-enwu ọkụ, na-egbochi ihe, na-anaghị ere ọkụ ma na-enweghị magnetik.
4) Mmetụta na-eguzogide, ọ naghị adị mfe nrụrụ, ma belata ike ọgwụgwụ.
5) Nhazi ahụ siri ike, nha ahụ na-agbanwe ma dịgasị iche iche, ma ogo ya kwụsiri ike.
6) mgbochi skid nwere obere ekwedo, enhances nkasi obi na mma ọrụ arụmọrụ.
7) Mara mma ma dị mfe ilekọta.
A na-eme grille nke FRP site na ịgwakọta ụcha agba n'ime resin niile. Agba dị iche iche, agba ya dị otu, agba ya na-enwu gbaa, ọ naghị adị mfe ịda, ọ chọghị agba, yana ọnweghị oke dị ka agba. Ọ nwere ezigbo ala jupụtara na resin na ọdịdị oblique. Elu dị n'ime na-eme ka grille nwee mmetụta nhicha onwe. Ọbụlagodi na enwere unyi, enwere ike iji mmiri ma ọ bụ nchacha saa ya ngwa ngwa, nke mere na grille elu dị ọcha dịka ọhụụ.
8) Ọ ka mma keukwu uru akụ na ụba: n'ichepụta na-eri nke FRP ji kpachie oghere bụ 1.4-1.8 ugboro na nke ígwè ji kpachie oghere, na echichi na-eri bụ naanị 20-40% nke carbon ígwè. Mmezi na-eri nke FRP ji kpachie oghere bụ fọrọ nke nta efu. The ígwè ji kpachie oghere dị mkpa ka a nọgidere na-enwe kwa afọ, na-akwakọba mmezi na-eri ukwuu karịa ngụkọta na-eri nke FRP okporo. Ọ bụ ezie na ego ntinye ego mbụ nke grape FRP dị elu karịa nke ji ọla nchara, ngụkọta akụ na ụba bara ụba bụ okpukpu 4-5 nke nchara nchara. Nke a bụkwa otu n'ime isi ihe kpatara nnukwu ojiji nke FRP grating na mba ọzọ.